Kwụ Slurry nfuli
Vetikal Slurry nfuli
Aja Ajịrịja nkume nfuli
N'ime 10 Years nka
Ike n'Ezi, pụrụ ịdabere na ịtụkwasị obi
Professional Field & Mmezi Service
Shijiazhuang mineral Equipment Co., Ltd. bụ ọkachamara Slurry mgbapụta soplaya na China. Anyị na-emekwa ke n'ichepụta na-amị nke oké ọrụ na oké ọrụ slurry nfuli na akụkụ ahụ mapụtara.
Ịbụ arụpụtara ke kasị elu ụkpụrụ, anyị na nfuli nwere ike ekwe nkwa na ogologo ndụ, elu arụmọrụ, mfe ime ihe na mmezi. Ha na-ọtụtụ-eji na Ngwuputa, ịnweta nhazi, tailings mkpofu, dredging, ewu, nkà mmụta banyere ígwè, ike osisi, nsị na mmiri ọgwụ, nakwa dị ka chemical na mmanụ ala na ụlọ ọrụ.
Kwụ Metal agbakọta High Head Slurry mgbapụta SB ...
Kwụ Rubber agbakọta Slurry mgbapụta SHR / 200F
Kwụ Metal agbakọta Slurry mgbapụta SH / 250ST
Kwụ Metal agbakọta Slurry mgbapụta SH / 100D
SHR- Rubber agbakọta nfuli
SHR mgbapụta nso e mere ịrụ na-aga n'ihu pumping nke ukwuu corrosive / oké slurries na Filiks si hydrocyclone ndepụta regrind, flotation na tailings na minerals mgbere osisi nakwa dị ka ndị ọzọ na ulo oru ngwa.
SG- Aja Ajịrịja nkume nfuli
SG usoro ndị SME oké ọrụ dredge na gravel nfuli, nke na-iji nye na-aga n'ihu pumping nke ukwuu abrasive slurries nwere nnukwu ahụ na elu nọgidere na-enwe efficiencies na ala mmezi na nwe-akwụ ụgwọ.
Address: Nke 260 Huai'an West Road, 050051, Shijiazhuang, Hebei, China